Ny teny vao sy ny voambolan-tsehatra ary ny fanapariahana azy – Blaogin'i Voniary
Fandre matetika ny hoe: “tsy ampy voambolana ny teny malagasy” na ny hoe: “ny manam-pahaizana sy ny tekinisiana no tena manafangaro teny”. Ny voalohany manao tsinontsinona ny tenintsika raha manakiana sy manome tsiny indray ilay faharoa.
Hoy ny fitenenana anefa hoe “tano ny anao fa ny an’olo tsy omeny”. Io teny malagasy io no antsika, ny firenen-kafa samy manana ny azy avokoa. Koa ho ataontsika toy ny valalan’amboa ve ka na ny tompony aza tsy tia? Tsia kosa e! Izany indrindra no nahatonga ny Teny Gasy 2.0 sy ny IKM nikarakara ilay hetsika “Teny malagasy, antsika rehetra” tamin’ny 17 Febroary lasa teo ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny teny ibeazana.
Loabariandasy nitondra ny lohahevitra: “Ny teny vao sy ny voambolan-tsehatra ary ny fanapariahana azy” no nentina ny tapany maraina. Nafana ny resaka, nafotaka ny adihevitra teo ambany fanentanan’i Sitraka Feno Tanteraka avy ao amin’ny Teny Gasy 2.0, ary nahitana ireto mpandray anjara ireto:
Dr Oliva Ramavonirina, tompon’andraikitry ny fikarohana eo anivon’ny foibe momba ny teny an’ny Akademia Malagasy ary akademisianina;
Sahaza Marline, mpandraharaha sy filohan’ny STEM4 GOOD Madagascar
Voniary, mpiblaogy sy filohan’ny Teny Gasy 2.0
Maro no nanoina ny antso ary nahafinaritra fa naneho fahalinana tanteraka ny mpanatrika na tamin’ny fihainoana na tamin’ny fandraisam-pitenenana. Raha vao mahita io lohahevitra io manko dia betsaka ny fanontaniana mby ao an-tsaina. Indro ary taterina aminao amin’ny endrika fanontaniana sy valiny ny hevi-dehibe tamin’io loabariandasy io. Mino aho fa hovoavaly ao anatin’ireo ny fanontaniana manitikitika anao. Araho ary!
Inona moa no mahasamihafa ny teny vao sy ny voambolan-tsehatra?
Ny teny vao na voambolam-bao dia teny tinefy avy amin’ny voambolana vahiny mba hialana amin’ny fanafangaroan-teny.
Matetika ireny fitaovana, fihetsika na zavatra mifandraika amin’ny fanatontoloana, ny teknolojia ary ny haitao vaovao ireny no ilaina fanefena teny vao.
Ny voambolan-tsehatra na voambolana teknika indray dia voambolana fampiasa eo amin’ny sehatrasa iray manokana, ohatra: fitsarana, fampianarana, aterineto, kajimirindra, haikintana, sakafo…
Iza no afaka mamorona teny vao?
Diso tanteraka ilay eritreritra hoe ny Akademia Malagasy ihany no afaka mamorona voambolana.
“Lovan-tsaina ny teny ka isika rehetra no tompony. Noho izany, zontsika ny manefy teny vao”
Dr Oliva Ramavonirina
Raha misy teny roa avy amina mpamorona teny roa samihafa, milaza zavatra iray ohatra dia izay raisin’ny mpiteny, izany hoe ny fiarahamonina no ankatoavina.
Inona izany no tena anjara asan’ny Akademia Malagasy manoloana ny famoronana teny vao?
Ny mpanefy teny (terminologue), ao amin’ny Akademia Malagasy no miandraikitra manokana ny famoronana teny. Misy efatra izy ireo eto Madagasikara ary anisan’izany I Dr Oliva Ramavonirina. Rehefa voaforona ny teny iray dia alefa sedraina eny amin’ny fiarahamonina. Ny Akademia Malagasy avy eo no mampiditra ireny voambolam-bao ireny any anaty rakibolana.
Misy koa anefa ireo teny mipoitra avy eny amin’ny fiarahamonina toy ny: “midororororo”. Rehefa hita fa betsaka ny mpampiasa azy ary mitombona ny fipetrak’ilay voambolana dia ampidirin’ny Akademia Malagasy any anaty rakibolana ihany koa izy ireny. Aza gaga izany ianao raha mahita hoe “midororororo” any anaty rakibolana vaovao.
Ary ahoana indray ny famoronana ireny voambolan-tsehatra ireny?
Matetika dia miara-miasa amin’ireo mpikatroka eo amin’ny sehatra iray ny Foibe momba ny teny an’ny Akademia Malagasy amin’ny famoronana voambolan-tsehatra izay atambatra ao anaty rakibolan-tsehatra. Toy izany ohatra ny namoronana ny rakibolan-tsehatra momba ny fitsarana, izay niarahan’i Dr Oliva Ramavonirina niasa tamin’ny mpitsara sy ny mpianatra mpitsara.
Aiza ho aiza ny ezaka fanapariahana ireny teny vao sy voambolan-tsehatra ireny?
“Mbola olana goavana ny tsy fisian’ny sora-bola manokana ho an’ny fampitaovana ny teny eto Madagasikara”
Ny fampitaovana dia ny fanefena voambolana vaovao, na voambolana teknika izany na voambolana tsotra, hanabe voho ny teny malagasy. Raha tsorina izany dia tsy misy vola ho an’ny famoronan-teny. Mibaribary eto ny tsy fanomezan’ny fanjakana lanja ny tenindrazantsika. Tsy vitan’izany ihany koa fa raha oharina amin’ny firenen-kafa, any Canada ohatra, izay manana manam-pahaizana mpanefy voambolana miisa 400 dia vitsy dia vitsy ny mpanefy tenintsika, 4 monja!
Na izany aza efa maro ny ezaka vita amin’ny alalan’ny famoahana rakibolan-tsehatra isan-karazany: ny zahatany, ny riaka sy ny morony, ny fanabeazana sy ny fampiofanana, ny fandrosoana lovainjafy, ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny maro hafa.
Marihina fa ireny rakibolana, rakipahalalana ary rakibolan-tsehatra novokarin’ny Akademia Malagasy ireny dia azon’ny tsirairay zahàna ao amin’ny biraon’ny Foibe momba ny teny an’ny Akademia Malagasy ao amin’ny Tahala Rarihasina, rihana faharoa. Misy karazana rakibolana hafa sy fitaovana momba ny teny malagasy maro ihany koa ao. Efa napariaka eny amin’ny fivarotam-boky ihany koa ireny rakibolan-tsehatra ireny ka azon’ny tsirairay jifaina.
Rakibolan-tsehatra. cc: Voniary
Ary aty amin’ny aterineto ve efa misy fanapariahana azy ireny?
Ny mahafinaritra aloha dia efa misy fitaovana maromaro azon’ny mpikirakira aterineto ampiasaina raha hitady voambolana malagasy izy.
Voalohany amin’izany ny Google dikanteny izay ahafahana mijery ny dikan’ny voambolana, fehezanteny na lahatsoratra avy amin’ny teny vahiny iray (frantsay, anglisy, espanola, arabo…) amin’ny teny malagasy. Ny indrokely dia mbola tsy ampy mihitsy ny voambolana ao, misy diso aza indraindray. Izany hoe mbola maro dia maro ny teny vahiny mbola tsy voadika amin’ny teny malagasy ao.
“Raha ohatra ka ny aterineto tokana ihany no loharano eo am-pelatanana ka maniry hamoaka lahatsoratra amin’ny teny malagasy ranoray ianao dia sahirana ihany.”
Misy ihany koa ireo tranokala sy pejy Facebook miezaka mizara ireny voambolan-tsehatra ireny. Santionany amin’izany ireto natolotry ny Studio Sifaka ireto:
Mondemalgache.org: Izy io dia rakibolana rakipahalalana malagasy ahitana voambolana, fomba fiteny, zava-misy ary sary maro mikasika an’i Madagasikara. Voambolana malagasy miisa 105000 no voatahiry ao hatramin’ny taona 2001 nananganana azy ka hatramin’izao. Mpampianatra mpikaroka Kanadiana, Jean-Marie de la Beaujardière no vovonana iadian’ny lohany amin’io tranonkala ary niarahany niasa tamin’ny foibe momba ny teny an’ny Akademia Malagasy.
Blaogy manokan’i Pr Vahinala : Zarainy ao ny vaofiteny momba ny fandrosoana lovainjafy izay niarahan’ny Groupe thématique sur le Changement Climatique – Madagascar (GT-CC) sy ny Akademia Malagasy nandrafitra.
Pejy Facebook SESCAM: voambolan-tsehatra momba ny didy aman-dàlana
Pejy Facebook Haikintana: voambolan-tsehatra momba ny haikintana
Pejy Facebook Blaogin’i Voniary: voambolan-tsehatra samihafa sy voambolana tsotra
Fanampin’ireo dia misy an’ireto ihany koa azon’ny tsirairay tsidihina:
Rakibolana kelin’ny Global Voice: Ahitana voambolana miompana amin’ny sehatra isan-karazany, dikanteny anglisy sy frantsay amin’ny teny malagasy.
Pejy Facebook Hiratra: Mampahafantatra voambolana malagasy sy ny famaritana azy.
Mipaka any amin’ireo tokony hampiasa azy ve ireo voambolana ireo?
Ireo mpisehatra eo amin’ny teknolojia vaovao matetika no misedra olana amin’ny fanafangaroan-teny noho ny tsy fisiana voambolana na tsy fahafantarana ireo voambolana malagasy mifandray amin’ny tontolony.
“Miezaka mampiasa teny malagasy araka izay tratra izahay, indrindra amin’ny lafiny fifaneraserana. Fa ireo voambolana teknika kosa matetika ajanona amin’ny teny anglisy”
Tsy ifanomezan-tsiny tokoa ny tsindrin’ny tontolon’ny teny, izay hita ihany koa eo amin’ny sehatry ny aterineto.
“Mbola tsy misy mihitsy ny rakibolan-tsehatra momba ny aterineto. Misy an’ilay Rantimbolana “Hay Fikajiana”, navoakan’i Georges Martial Indrianjafy ihany mifandray amin’izay saingy mbola tsy napariaka ilay izy ary manalasala ihany ny hampiasa ny teny ao anatiny.”
Hetaheta sy hevitra nivoaka nandritra ny loabariandasy
Ny loabariandasy tahaka ireny moa dia natao hamoahana hevitra vaovao. Nahavelom-bolo tokoa fa nisy vokany ny fifanakalozan-kevitra teo amin’ny mpandray anjara sy ny mpanatrika anisan’izany ireto:
Nandray anjara ihany koa ny mpanatrika. cc: Voniary
Hisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Teny Gasy 2.0 sy ny foiben’ny teny an’ny Akademia Malagasy mba handrafetana ny rakibolan-tsehatra momba ny aterineto;
Ny Akademia Malagasy dia tokony raisina tahaka ny raiamandreny: azon’ny tsirairay atonina izy raha misy tetikasa na fifanakalozan-kevitra momba ny voambolan-tsehatra kasaina hatao. Singanina amin’izany ireo mpisehatra maniry hanolotra sosokevitra amin’ny teny vao eo amin’ny sehatra misy azy;
Misy ihany koa ireo teny tranainy, hita ao amin’ny baiboly ohatra, izay mety mahalaza zavatra amin’izao fotoana izao ka tokony hovelomina;
Tsara kokoa ny fankaherezana mihoatra amin’ny famaizana. Tokony hisy mari-pankasitrahana manokana ho an’ireo olona mahavita ezaka manokana amin’ny fanomezan-danja ny teny malagasy eo amin’ny sehatra misy azy.
Marina fa mbola vitsy ny mpikirakira aterineto eto amintsika, (5%-n’ny Malagasy). Ilaina ihany anefa ny mamelona ny teny malagasy ao satria lova mipetraka ho an’ny taranaka io ary io no anisany varavarankely ahitan’ny avy any ivelany fa velona ny tenintsika. Mila finiavana sy fifarimbonana anefa izany, raha tsy hilaza ny momba ny fampidirana voambolana ao amin’ny Google dikanteny fotsiny. Marihina moa fa olon-tsotra tsara sitrapo, tsy mandray karama no mampiditra azy ireny ao. Koa manentana ny tsirairay araka izay fahafahany mba hiara-hisalahy amin’ny fanampiana sy ny fanitsiana ny voambolana ao.
akademia Malagasy, rakibolan-tsehatra, tenin-dreny, teny gasy, teny gasy 2.0, teny ibeazana, teny malagasy, teny vao, voambolan-tsehatra, voambolana malagasy, voambolana teknika
3 commentaires sur “Ny teny vao sy ny voambolan-tsehatra ary ny fanapariahana azy”
Mankasitraka amin’ny ezaka. Tena sarotra tokoa aloha vao mahaforona voambolana mifanaraka amin’izay tiana hambara,hany ka miovaova ny dikan-teny: tohotsofina, finday…Ny finday anefa dia « fitondra » toa mbola tsy mahadika azy. Efa misy ve ny voambolana mikasika ny « fanabeazana »: pedagôjia na psychologie… Mankasitraka an’izay hamaly tompoko!
Ny finday dia fandikana ny hoe « portable ». Izany hoe misy ny solosaina finday ary misy koa ny telefaonina finday.
Vao nivoaka tamin’ny volana Febroary teo mihitsy ny rakibolan-tsehatra momba ny fanabeazana sy ny fampiofanana. Efa azo jifaina eny amin’ny fivarotam-boky.
RAKOTONOMENJANAHARY Sasmon dit :
Ho ela velona ny Teny Malagasy